Leaked tọhapụ ụbọchị, ọnụahịa na nkọwa nke HTC U12 | Gam akporosis
HTC U12 tọhapụ ụbọchị, ọnụahịa na ụdịdị leaked
HTC bụ otu n'ime ndị na-emepụta ihe na-ewetaghị ihe ọ bụla n'oge 2018 World Congress CongressIkekwe maka ọtụtụ ndị abụghị ihe ijuanya ebe ọ bụ na ọkọlọtọ ya kachasị ọhụrụ, HTC U11 + dị naanị ọnwa ole na ole.
Ọbụna na-enweghị ukara ọmụma, na HTC U12 ị hụla ihe nchọgharị na mkpọpu nke kwupụtara ụfọdụ njirimara ya na taa ọ bụ isiokwu ọzọ mgbe ọhụụ ọhụrụ na-ekpughe ihe ndị ọzọ atụmatụ, ya price na tọhapụ ụbọchị.
Atụmatụ, ọnụahịa na ụbọchị ntọhapụ nke HTC U12 +
Dabere na isi iyi nke leak ahụ, HTC U12 (aha ya bụ Imagine) ga-abịa n'ụzọ nwere a Ihuenyo 6-anụ ọhịa na mkpebi 2K (ma ọ bụghị 4K dika asuru na mbu) na 18: 9 ruru dị ka ekwentị kachasị elu.
N'ime ị ga-enwe a Snapdragon 845 processor tinyere 6 GB nke Ram na 128 GB nke nchekwa nchekwa, ngwakọta a maara nke ọma.
Na ngalaba foto, enwere vetikal ndokwa nke abụọ 12-megapixel ese foto na azụ na otu 8-megapixel n'ihu igwefoto, Igwe mkpisiaka nyocha ga-anọkwa n'azụ.
El HTC U12 ga-ebu Sense 10, a customization oyi akwa na-agba ọsọ n'elu gam akporo Oreo. Dị ka HTC 11 + ọ ga-enwe oghere maka SIM abụọ.
Banyere imewe ahụ, HTC 12 ga-enwe iko na abụọ, asambodo IP68. HTC ga - agbakwunye Edge Sense 2.0, ụdị nke abụọ nke "mmekọrịta na n'akụkụ" nke dị na ekwentị HTC ọhụrụ.
N'ihi na obodo kwụụrụ a 3980 mAh batrị na-akwado Ndenye Nchapu 3.0, nke ga - eme ka ngwaọrụ zuru ezu na ihe na-erughị nkeji 90.
Ọnwụ ahụ na-agwụ site n'ikwu na a ga-arụ ọrụ ngwaọrụ ahụ n'April nke afọ a ego nke $ 880 (~ 720 euro), ntakịrị ala karịa HTC U11 + nke dakwasịrị ahịa na-efu ~ 760 euro.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » HTC » HTC U12 tọhapụ ụbọchị, ọnụahịa na ụdịdị leaked
Okechukwu alberto dijo
Ezi ụdịdị na ọnụahịa na-ada ụda dị mma… Mgbe htc bụ nke na-adịkarị elu karịa nkezi
Zaghachi David Alberto